भोजन सेट - फर्नीचर - प्रेरणा
कोटी: भोजन सेट
आधुनिक घरमा, भान्साकोठा पकाउने ठाउँ मात्र होइन। आज धेरै मानिसहरू भान्साकोठा र बैठक कोठालाई एक धेरै सामाजिक ठाउँ मान्दछन्। यो आगन्तुकहरूको स्वागत र भान्साकोठामा वा बैठक कोठामा यसको पछि बस्तीबाट पनि प्रमाणित हुन्छ। हामी भान्छाघर र बैठक कोठा बीच "सीमा" को ड्रपिंग पनि भेट्छौं। मानिसहरू यो स्थान जडान गर्न धेरै खुसी छन्। भोजन सेटहरू प्राय: जडानको लागि उपयुक्त उपकरण हो। स्टाइलिश टेबल र कुर्सी घरहरूको आधुनिकीकरण गर्नका लागि उत्कृष्ट थप हो। हामी टेबुल र सबै भन्दा राम्रो सामग्री को कुर्सी प्रस्ताव। प्रयोग गरिएको सामग्रीको शीर्ष गुणवत्तालाई धन्यवाद, फर्नीचरको टिकाउपन सुरक्षित गरियो। उत्तम मूल्यमा गुणवत्ता भोजन सेटहरू छनौट गर्नुहोस्।
जुलाई,, २०१ फेब्रुअरी १,, २०२१ व्यवस्थापक
तपाईले टेबुलमा खानुपर्दैन। भोजन कोठामा तपाई पनी परिवार वा साथीहरूसँग बसेर आनन्द लिन निश्चित हुनुहुन्छ। निम्न रेखाहरूमा, हामी सँगै हेर्नेछौं तपाईंले भोजन कुर्सीहरू खरीद गर्दा कस्तो सामग्री छनौट गर्नुपर्नेछ। ठोस काठ खाने कुर्सिहरू हालै तपाईं बजारमा भोजन कुर्सीहरूको एक विस्तृत चयन पाउनुहुनेछ। सामग्री मध्ये, ठोस काठ को कुर्सि अझै लोकप्रिय छ, तर लाइट कुर्सिहरु पनि […]
एक गुणवत्ता भोजन तालिका?
जून,, २०१ फेब्रुअरी १,, २०२१ व्यवस्थापक
के तपाईं एक भोजन कोठा प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ? भोजन कोठामा फर्नीचरको प्रमुख अंश एउटा टेबल हो। तपाईं यो स्थिर, आरामदायक भएको चाहनुहुन्छ र तपाईंलाई यो मनपर्दछ। त्यसकारण, तपाइँले यसलाई छनौट गर्दा धेरै कारकहरू विचार गर्न आवश्यक छ। भोजन तालिकाको आकार र स्थान तपाईले आफैंलाई सोध्नु पर्ने पहिलो प्रश्न भनेको खाने टेबल कहाँ राख्नु पर्छ। पर्याप्त बसने ठाउँको मात्र विचार गर्नुहोस्, तर […]